Brake Caliper diski, breeki ebe a na-adọba ụgbọala eletriki, akụkụ trailer - KTG
Anyị bụ ọkachamara n'ịzụlite na imepụta calipers ụgbọ ala, breeki caliper ụgbọala na-adọkpụ, EPB, ngwa nrụzi breeki caliper, akụkụ diski diski nke gụnyere piston, actuator, breeki rọba na ihe ndị ọzọ.
Gbanwee caliper breeki diski
N'ozuzu, breeki calipers bụ ndị a pụrụ ịdabere na ya, ma na-achọ ka edochi obere oge karịa pad na diski, mana ọ bụrụ na ị ga-agbanwe otu.
A na-eji ngwaahịa anyị eme ihe na ụgbọ ala dị iche iche: Ụgbọ ala ndị njem, SUV, ụgbọ ala azụmahịa, ụgbọala na-adọkpụ ụgbọ mmiri, ụgbọala na-ebuli elu, na ihe ndị ọzọ.Anyị ga-echekwa nchekwa gị n'ụzọ.
Dochie breeki ụgbọala na-adọkpụ
Kama, ndị na-ahụ maka igwe na ndị na-emepụta breeki na-atụ aro ka idobe ụfọdụ mgbanwe iji nyere aka mee ka ọnọdụ izugbe nke breeki gị aka.Ụdị mgbanwe ndị a, dị ka ibu ụgbọala ụgbọala gị.
Akụkụ Ọkwọ ụgbọala ọhụrụ ...
N'ihu breeki Caliper maka...
Akụkụ Ndị njem n'ihu R...
NEW Electric moto 970 ...
Traile igwe anaghị agba nchara...
Igwe breeki diski n'ihu...
Igwe breeki diski azụ...
Spa breeki caliper spa...
Ndepụta ọnụ ahịa maka elu kwa otu...
Ọrịre dị ọkụ maka Frozen Ca...
KTG Auto na-elekwasị anya n'inye breeki calipers ihe dị ka afọ 10 na mgbe niile n'ọdịnihu.Anyị bụ ndị ọkachamara na-ebubata breeki caliper dị na Shanghai.Anyị nwere karịa ọnụọgụ OE 3,000 maka breeki caliper na katalọgụ anyị, ma na-aga n'ihu na-emepụta ngwaahịa ọhụrụ karịa ọnụọgụ OE 200 kwa afọ.Anyị na-enyekwa OEM/ODM ọrụ ntọala na chọrọ.Anyị bụ ọkachamara n'ịzụlite na imepụta calipers ụgbọ ala, breeki caliper ụgbọala na-adọkpụ, EPB, ngwa nrụzi breeki caliper, akụkụ diski diski nke gụnyere piston, actuator, breeki rọba na ihe ndị ọzọ.
Akụkọ ụlọ ọrụ >>
Anyị na-emepe emepe na mmemme maka ụgbọ ala dị iche iche, gụnyere ụgbọ ala America, European, Japanese na Korea, na-enye ndị ahịa n'ụwa niile ihe ndị a pụrụ ịdabere na ya, nke akụ na ụba, na nchekwa.
Caliper edoziri Mpempe akwụkwọ breeki na ọnụ ahịa calipers Teal breeki Calipers Jak Brake Caliper Caliper eburu ọkara Caliper Saab